Banyere Anyị - Hebei Yuniu faiba glaasi Manufacturing Co., Ltd.
Ngwa akụrụngwa anyị ejikere nke ọma dị oke mkpa na uto na mgbasawanye nke ọrụ azụmaahịa anyị. The ọkaibe na oge a na ụlọ ọrụ na-enyere anyị aka ịzụlite Fiber-Glass Ngwaahịa nke ọma. Anyị akụrụngwa na-agbasa n'elu a nnukwu ebe na-ekewapụ n'ime n'ichepụta unit, àgwà nkewa na nkwakọba unit.
Anyị n'ichepụta unit na-onwem na nzube pụrụ iche igwe na mkpa ngwaọrụ & akụrụngwa. Site n'iji igwe ndị a, anyị nwere ike imepụta ngwaahịa anyị n'ọtụtụ buru ibu ma zute ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Anyị ụlọ ọrụ nwere anyị pụrụ iche ọkachamara mgbe-ire ọrụ ngalaba, ngwaahịa nwere a elu ugwu na anụ ụlọ na-ewu ewu na mba ahịa kwa.
Ebumnuche anyị bụ ijere ihe eji azụ ahịa zuru ụwa ọnụ, iji mee ka ndụ ndị mmadụ nwee nchekwa, gburugburu ebe obibi.
Anabata azụmahịa imekọ ihe ọnụ site anyị elu àgwà ngwaahịa na ezi obi ọrụ, iji merie ndị mara mma echi ọnụ!
Anyị na-ahụ na Ngwa Fiber-Glass na-enye ụkpụrụ dị elu. Ndị na-achịkwa anyị dị mma na-enyocha usoro ọrụ mmepụta oge niile iji hụ na ngwaahịa anyị zuru oke. Anyị na-agbaso usoro teknụzụ kachasị ọhụrụ na usoro njikwa njikwa, nke na-eme ka ụkpụrụ na nkọwa dị mma.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ogo klaasị mbụ na ngwaahịa ndị nwere ikike zuru oke site na BV, SGS na ISO9001.
Ya mere, ị pụrụ izu ike anyị zuru okè mma na ọrụ.
Ebe ọ bụ na e guzobere na 2012, na ndị ahịa zuru oke na ụlọ na mba ọzọ.A na-ere ngwaahịa anyị na mba iri asatọ na isii ugbu a.Anyị nwere òkè ahịa na Europe, North na South America, Australia, Africa, Middle East na South-East Eshia.
Nye anyị ohere, anyị ga-eweghachi gị na afọ ojuju. Anyị ji ezi obi na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ aka.